Madaxweyne Caan ah oo ka farxiyey Qaxootiga ku dayacan Caalamka - Hablaha Media Network
Madaxweyne Caan ah oo ka farxiyey Qaxootiga ku dayacan Caalamka
HMN:- Madaxweynaha dalka pilipin Rodrigo Duterte ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi uu siiyey Barnaamijka 101 East ee Telefishinka Aljazeera, wuxuuna sheegay inuu dalkiisa qaabilayo Qaxootiga ay Dowladaha Reer Galbeedka ka xirteen xuduudaha.
Qiyaastii 1.8 million oo qof ayaa Qaxooti noqday sannadkii la soo dhaafay, iyadoo Caalamka goobjoog ka tahay in 300% ku kordheen tirade dadka ku barakacay Xiisadaha dhacay muddadii u dhexeysay sannadihii 2005-tii ilaa 2015-kii.
“Waxaan dhay inoo soo dira. Annaga ayaa qaabili doona. Waax oggolaan doonaa dhamaan Qaxotigaas” ayuu yiri Madaxweyne Rodrigo Duterte.
Waxa uu si kulul u naqdiyey Dowladaha Reer Galbeedka oo uu sheegay inay bedeleen Dhowrista Xuquuqda Aadanaha.
Waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay inay Dowladahaasi silig iyo derbi ku wareejiyaan Xuduudahooda, si aysan Qaxootiga uga soo gudbin.